ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခသည်စခန်းက မိသားစုတချို့ မြန်မာဘက်ပြန်လာ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခသည်စခန်းက မိသားစုတချို့ မြန်မာ...
20 ธ.ค. 2562 - 00:29 น.
လူ ၈ ယောက်ပါ၀င်တဲ့ ဒုက္ခသည် မိသားစု တချို့ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကနေ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့နယ်ကို သူတို့သဘောနဲ့ သူတို့ ပြန်လာကြတယ်လို့ မောင်တောမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှထွန်းကျော်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
မောင်တောမြို့ တောင်ပြိုဒေသက ဒုက္ခသည်စခန်းကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့က ရောက်ရှိလာတယ်လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
"သူတို့ တောင်ပြိုလက်ဝဲ ဒုက္ခသည် စခန်းကို ဝင်လာတယ်လို့ သိရတယ်၊တောင်ပြို ဧရိယာ ကျောက်ချောင်းဆိုတဲ့ ဒေသက ဒေသခံတွေပါ။ သူတို့ပြန်လာချင်တာကို တားထားတဲ့ အတားအဆီးတွေ ကြားက ဖောက်ထွက်ပြီး ပြန်လာတာ" လို့ ဦးလှထွန်းကျော်က ပြောပါတယ်။
ဒီလူတွေဟာ နှစ်နိုင်ငံ အစီစဉ် မဟုတ်ဘဲ မိမိတို့ သဘောနဲ့ပြန်လာတာဖြစ်လို့ ဒုက္ခသည် စခန်းမှာ မဟုတ်ဘဲ သူတို့ဆွေမျိုးတွေရှိ တဲ့ နေရာမှာ နေရာချထားပေးခဲတယ်လို့ လည်း ဘီဘီစီ သတင်းထောက်က ပြောပါတယ်။
အခု ပြန်ဝင်လာကြတဲ့သူတွေဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ ဒုက္ခသည် စခန်းတွေမှာ နေထိုင်ရတာ ကျဉ်းကျပ်တဲ့ အပြင် လုပ်ကိုင်စားသောက်ရတာ အဆင်မပြေသလို စခန်းပြင်ပကို လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်မရရာကနေ ပြန်ဝင်လာတဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ပြန်ဝင်လာတဲ့သူတွေနဲ့ နီးစပ်သူတွေက ပြောပါတယ်
ပြန်လာသူတွေကို လှဖိုးခေါင်ယာယီစခန်းကို ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက် အနောက်မြို့မရပ်ကွက်နဲ့ ကျောက်ချောင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆီကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ သူတို့က ပြောပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ ၂၀၁၈ခု နှစ်ကစပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်နယ်စပ်က ဒုက္ခသည် စခန်းတွေကို မိမိတို့ သဘောနဲ့ ပြန်ဝင်လာသူ အရေ အတွက်ဟာ ၃၀၀ နီးပါး ရှိပြီလို့လည်း မောင်တောမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှထွန်းကျော်က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ပြန်လာသူတွေထဲမှာ စုစုပေါင်း အမျိုးသမီး ၃ဦး အမျိုးသား ၅ ဦးလို့လည်း ဦးလှထွန်းကျော်က ပြောပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ကနေ စပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းက ရဲစခန်းအပါအဝင် နယ်ခြားစောင့် စခန်းတွေကို ARSAအဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေ အပြီးတပ်မတော်က နယ်မြေရှင်းလေးရေး လုပ်ကိုင်စဉ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကို မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည်တွေ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။
နှစ်နိုင်ငံ ဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်လည်လက်ခံဖို့ မြန်မာ နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံ ကြားသဘောတူခဲ့ပေမယ့် ဒုက္ခသည်တွေဟာ ပြန်ရောက်မလာသေးပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် စခန်း ကို ၂ ရက်တာ သွားရောက်ခဲ့ကြတဲ့ မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ အာဆီယံ က ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ရဲ့ ခရီးစဉ် ဒီနေ့မှာ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
ခရီးစဉ်အတွင်း သူတို့ဟာ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ၄၆ ယောက်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာ အသိုင်းအဝိုင်းက ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်း တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ က ပြန်လာကြမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့် စိစစ်ရေး ကတ်ပြား အန်ဗီစီ ကတ် ထုတ်ပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာ တွေ ဘက်က နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ နဲ့ သူတို့ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးကို အာမခံ ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ နေထိုင်နေရတဲ့ အခြေအနေတွေ အလွန်ဆိုးရွားနေတယ်လို့ ဘီဘီစီ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သတင်းထောက်ပြော
ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လာဖို့ ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာတုန်းက မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အကြား အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုစားခဲ့ပေမယ့်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
ဝန်ကြီးဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေး ကတော့ "ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ARSA အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဝင်တွေက ဒီဘက်ကို မသွားကြဖို့ ဒုက္ခသည်တွေကို ပြောဆို ခြိမ်းခြောက်တာတွေ ရှိတယ်" ဆိုပြီးတော့ ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်မြောက်ပိုင်း ပဋိပက္ခတွေကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံဘက်အခြမ်း ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေထဲက စိစစ်ပြီးသား ဒုက္ခသည် ၃၄၅၀ ကို သြဂုတ်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ပြန်လာဖို့ မြန်မာနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အကြား သဘောတူထားခဲ့ကြပေမယ့် သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့မှာ ဒုက္ခသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ပြန်မလာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။
ဘင်္ဂလားဒေရှ် ဘက် က ဒုက္ခသည်တွေကို လှဖိုးခေါင်၊ ငါးခူရ၊ တောင်ပြိုလက်ဝဲ စတဲ့ဒုက္ခ သည်စခန်းတွေမှာ ပြန်လည်လက်ခံဖို့စီစဉ် ထားပြီး ပြန်လာတဲ့ သူတွေကို စားနပ်ရိက္ခာ အဝတ်အထည် နဲ့စောင့်ရှောက် မှုတွေပေးနေတယ် လို့လည်း ရခိုင်ပြည်နယ် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှူး ဦးစီးဌာန ဦးစီးမှူး ဦးရဲမင်းဦးက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခသည်စခန်းက မိသားစုတချို့ မြန်မာဘက်ပြန်လာ